साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस – Classic Khabar
May 18, 2021 223
साबधान ! को-रोना संक्रमण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! को- रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को- रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्नु होला ।
Prevप्रहरी हवल्दार डिउटी हुँदा श्रीमतीले परपुरुष घरमै बोलाएर घर मै गर्थिन मोज, श्रीमान डिउटीबाट घर आउँदा बस्नु पर्थ्यो भोकै (भिडियो)